Cosmetic လား – Skincare လား…. | Mizzima Myanmar News and Insight
အလှအပအတွက် မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ခဏတာလှပဖို့ထက် အမြဲလှပဖို့ကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ Hello ဆရာဝန်ရဲ့ လေဒီပရိတ်သတ်တွေကရော နေ့စဉ်တိုင်းမှာ လှပနေစေဖို့အတွက် ဘာကိုရွေးမယ် စဉ်းစားလဲ။ Cosmetic လား၊ Skincare လား………..
Cosmetic ကပေးတဲ့ အလှတရား
အလှကုန်ဆိုရင် အားလုံးက လှအောင်လုပ်ပေးတာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်လေလို့ အလွယ်တကူတွေးမိလိုက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလှကုန်တွေကသင့်ကို လှစေတယ်ဆိုပေမယ့် ရေရှည်မှာ အသားအေရကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အေပၚယံအလွကိုပဲ ပေးစွမ်းနိုင်တယ်၊ လို့ပြောချင်ပါတယ်။ အလှကုန်တွေ ၊ မိတ်ကပ်တွေက အပေါ်ယံအရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို Liquid type မိတ်ကပ်တွေဆိုရင် ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တာလိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားတစ်ထောက်စာအလှကိုပဲ ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ပြောရမှာပေါ့။ အလှကုန်တွေက တာရှည်မခံတဲ့ အလှတရားကိုပဲပေးစွမ်းနိုင်တာပါ။ အသက်ကြီးတဲ့အထိ အများကငေးအောင်လှချင်ရင်တော့ အဆင်မပြေလှဘူးပေါ့။ ပွဲနေပွဲထိုင်အနေအထားမျိုးအတွက်ပဲ မိတ်ကပ်က အဆင်ပြေစေမှာပါ။
Skincare ကပေးတဲ့ အလှတရား